Ụbọchị My Pet » Ná nrọ na Libro: Olee otú A Good Dog jiwo A Bad Nwanyị
site Louise Bernikow
emelitere ikpeazụ: Jul. 08 2020 | 2 min agụ
Ọ bụ ezie na anyị ka nọ n'ebe dị anya site ezumike nká ma ọ bụ decrepitude, Libro na m nọ na-eru nso n'oge okpomọkụ na a obodo ewekarị okpomọkụ ebili mmiri, ebe ikuku conditioners nọ ka anyị dị ndụ ma kaa akara na ulo.
Ịmara otú Libro ahụhụ na sizzling si ekwo ekwo na otú ogologo oge ọ nọ kemgbe na m na-ama a n'ezie ezumike, M kwuru 'ee’ mgbe enyi nke a enyi m gwara m banyere ihe na-atụghị anya dị Long Island osimiri mgbazinye maka ọnwa nke August.
My enyi enyi dara na ịhụnanya na a California nwoke na dị njikere ịhapụ East Coast ájá na surf n'ihi na ịhụnanya na-na San Francisco. Na-azọnye n'ime akwu egg, M nyeere ya.
M dina mma odo blanket m wepụrụ otu n'ime closets na ájá na Libro nọdụrụ na ya. Ọ bụ ka n'oge, ma m na-etinye ahụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-acha ọcha nkeewa akara nche anwụ M hụrụ Re ma jide n'aka na obere onyeisi bụ n'enweghị n'okpuru ndò ya. Mgbe ahụ, m jere ruo na mmiri. O wee bilie soro. Anyị merela agadi. Site na mgbe m bụ nwa ehi miri, Libro kwụsịrị na-achọ mmụọ ịlụ ọgụ. M gbara ya ume na-anụ. Ọ jụrụ. M zitere ya azụ ka blanket. Ọ jụrụ. M asụwo ude na-ele anya na mbara igwe. Ọ gaghị na-eso m na; ọ ga-agaghị anọ onshore. Anyị adịkarịghị nwere ike siiri dị ka nke a, ukwuu n'ime n'ihi na ọ bụ otú ahụ ezigbo nkịta na n'ihi na m si mesoo ya pụtara, ịbụ chọọ ma ghara aka ike na-egosipụta akara.
M ga-aghọ a nkịta onye, n'ikpeazụ. Ma stalemate na ụkwụ anyị na mmiri e dịghị mfe kpebiri. M morphed n'ime a dominatrix, achọ na ọ na-eche na blanket, n'okpuru ya nche anwụ ma ọ bụrụ na ọ ga-naa n'akụkụ m na mmiri. O we laghachi n'ụlọ isi. M na-egwu mmiri si naanị. Ma mkpọtụ na osimiri dọọrọ m azụ. Libro e ọduọ na ala, barking. M wee si n'ime mmiri ka obi sie ya na ogwe aka m na ụkwụ e fluttering, bụghị flailing
M mere mezuo iwu na ala, dị ka a madwoman na ezie na m na-egwu mmiri fọrọ nke nta ka ya n'anya, M ga-alaghachi kpụrụ na na na naa na ya: M ga-ahapụ gị. M ga-ahapụ gị. Libro na ekweghị m. Nnapụta mkpa. Nke a doro anya na chọrọ ọduọ na ala osimiri ma na-eti mkpu na-akpọkọta ndị agha. Ọ bụrụ na m na-egwu mmiri, ọ etiwo mkpu ákwá; ma ọ bụrụ na m bịara nke mmiri, o dina ala na blanket dị ka a ọma nkịta.
Ọ bụ nnọọ na-ekpo ọkụ ụbọchị. M nwetara iwe. M nwetara na-akasi obi. M lụrụ egwu. M nyere ya biscuits na nkuzi na mere a otutu nkwa. Ọ dịghị ihe na-arụ ọrụ. M wee azụ n'ime mmiri na o we laghachi mkpu etiri ruo mgbe, na-atụ egwu nke a na-chụpụrụ site ndị ọzọ na-anụ ụtọ ụbọchị na osimiri, M wee ya n'ụlọ. On ụdi ụbọchị, M gbalịrị na-ahapụ ya n'ime ụgbọ ala na windo n'enweghị lowered mgbe m gara a igwu mmiri, ma ọ barked e, kwa achọ, egwu etieti ogbugbo mgbe m, ịhụnanya nke ndụ ya, banyere mmiri na ihu ihe ọ nọgidere na-kweere bụ ụfọdụ ọnwụ. N'ikpeazụ, ọ na-anọ n'azụ na mgbazinye ụlọ, ọbụna na kacha ekpo ọkụ ugbu ụbọchị, na ndị niile n'ala Fans gbara ya, ma ọ bụrụ na m chọrọ a igwu mmiri. Anyị na-ama ruru mbụ njọ esemokwu na anyị zuru okè njikọ, mbụ anyị ude na m ụtọ bụghị mgbe nile ya, ma ọ bụ ya m. The ike duo nwere ike, mgbe ụfọdụ, iche iche n'okporo ụzọ bliss.